OEM * ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်တပ်ရန်
သဲလွန်စ Element ကို
အရေပြား & Shell ကအရောင်
အားလုံးပါ ၀ င်သည်
ဓာတ်သတ္တု Element ကို
အားကစား & စွမ်းအင်
Chelated Micro နဲ့အာဟာရ
ထဲကဓာတုပစ်စညျး & ဓါတ်ကူပစ္စည်း
အရည်အသွေး & Service ကို
ကွိုးစားပါ & ခွငျး
ကျနော်တို့အေးဂျင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အဘို့ရှာကြ၏။ စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်? e-mail, ကျေးဇူးပြု. : sales@puyerinternationalgroup.com
လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ရှာဖွေရေးတွင် Puyer Group သည်အမြတ်အစွန်းနှင့်နည်းပညာထုတ်ကုန်အသစ်များအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်တောင်းဆိုမှုကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြုံများကိုစုဆောင်းခဲ့သည်။
ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ လူ့စောင့်ရှောက်မှု၊ အလှကုန်အလှအပ၊ တိရိစ္ဆာန်အာဟာရ၊ အပင်ကြီးထွားမှုနှင့်ငါးမွေးမြူရေးကဏ္ cover တို့ပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များမှာ - ထိရောက်သော၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် ၀ င်းဝင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်စုသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, ကုန်သွယ်မှုနဲ့ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့အချိန်မီပေးပို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ရေရှည်တည်တံ့တန်ဖိုးကိုဆောင်ကြဉ်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန် FTAs ​​အပါအဝင်ကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းအတော်များများမှာအတွက်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများနှင့်ရုံးခန်းများ, ရှိသည်။
နောက်ထပ် Read >
Puyer သည်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုပေးသည်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစျေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီပြီးကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကိုအချိန်မီပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားမျိုးစုံရောင်းဝယ်မှုနှင့်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့သည်သင်၏ကုမ္ပဏီလိုအပ်ချက်များကိုကူညီနိုင်သည်။
Vitamin B12 (Mecobalamin)
Dicalcium ဖော့စဖိတ် 18% Powder granular Feed အဆင့်
စူပါကိုစုပ်ယူ Polymer အမျိုးအစား (SAP)
အမိုင်နိုအက်ဆစ် 50% Powder အော်ဂဲနစ်
ကျနော်တို့သတင်းအချက်အလက်, နမူနာ & Quote, ဆကျသှယျရနျကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုခြင်းအရည်အသွေးကိုထုတ်ကုန်နှင့်အတူဖောက်သည်များကိုကြိုးစားကြသည်,
Puyer Group မှ© 2019 All Rights Reserved
Beta-Carotene, BLOCHEMICALS, အင်ဇိုင်း, ဗီတာမင် C ကို coated , ထဲကဓာတုပစ်စညျး, ထဲကဓာတုပစ်စညျး & ဓါတ်ကူပစ္စည်း,
HQ: 19C LOCKHART CTR နည်း 301-307 LOCKHART RD WAN Chi ဟောင်ကောင်
+8615507515690 (7 * 24 နာရီ)
Pellet Binder – an advanced-genera...
Carotenoids,5Health Benefits
Flavonoids supplementation——An ideal appr...
Green tea extract —— scavenging free rad...
Galactosidase – has the transfer f...